म एमाले थिएँ, ज्यान गएपनि नेकपा भइनँ, अब हुने कुरै छैन (अन्तर्वार्ता) - Dainik Nepal
रामकृष्ण हुँमागाइँ, नेता, नेपाली कांग्रेस २०७६ जेठ ३० गते ८:१८
रामकृष्ण हुँमागाइँ, नेता, नेपाली कांग्रेस
झण्डै ३७ वर्ष माले हुँदै नेकपा (एमाले)मा काम गरेका रामकृष्ण हुँमागाइँको मन भाँच्चिएको छ । ललितपुर जिल्लामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) को प्रभावशाली नेताका रुपमा परिचित हुमागाइँ दुई पटक गाविसको अध्यक्ष समेत भएका छन् । मन भाँच्चिएपछि जेठ २४ गते ललितपुरको लगनखेलमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको सभामा हुँमागाइँले सभापति शेरबहादुर देउवाको हातबाट सदस्यता लिएर कांग्रेस बन्नुभएको छ । हुँमागाइँ ललितपुर कांग्रेकाे जिल्ला सदस्यमा नियुक्त पनि भइसक्नु भएकाे छ । यति लामो कम्युनिस्ट राजनीति छाडेर कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएका रामकृष्ण हुँमागाइँसँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश
अहिले भन्नु हुन्छ भने बामदेव गौतम, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता मान्छेहरूको पनि यो पार्टीमा सुरक्षा छैन । स्थायी समिति सदस्य रघु पन्तहरूको पनि सुरक्षा छैन भने म जस्ता मान्छेलाई हेर्ने त कुरो भएन । अनि कतिपयले टिकट नपाएको भनेको हुनाले कांग्रेसमा छिर्‍यो भनेका छन् । एउटा कुरो त जीवनभरि मैले अरुलाई बोकेर हिँड्ने । मिठारामलाई दुई पटक जिताउन हिँडे, सुशीला नेपाललाई अर्को पटक जिताउन हिँडे, मधुसुदनले जित्न सक्नु भएन तर दुई पटक हिँडे । सधैँ हिँड्ने । सबै जिताउने अनि मेरो पालो चाहिँ कहिले नआउने ? मेरा पनि इष्टमित्र छन्, दाजुभाई छन् । छरछिमेकी छन्, शुभेच्छुक छन् । तेरो चाहिँ पालो कहिले आउँछ ? सधैँ तँ झोला बोकेर बुढो हुने भन्ने स्थिति भयो । कमसेकम मलाई यो पटक प्रदेशको टिकट पाइन्छ भन्ने थियो । केपी ओलीले पाउँछस् पनि भन्नुभएको थियो । अन्तिममा आएर त्यो टिकट पनि पाइएन । भनेपछि यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि नरहने । राष्ट्रलाई पनि यसले राम्रो दिशातिर न लैजाने । अनि म व्यक्तिगत रुपमा मलाई पनि न्याय हुँदैन भने अनि म यो पार्टीमा बसेर यी नेताहरूलाई आदर्श पुरुष मानेर बस्नुको कुनै जरुरी भएन ।
सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस । तीन वटा क्रान्तिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । इतिहाँस कसैले यो होइन भन्न पाएन । ०७ सालको क्रान्ति, ०४६ सालको क्रान्ति र ०६२–०६३ सहित तीन वटा क्रान्तिको यद्यपि अरु पार्टीहरू पनि छन् । ०४६ र ०६२–०६३ को आन्दोलनमा अरु पनि छन् । हामी पनि छौँ । नेकपा (एमाले) लगायत अरु पनि छन् । माओवादीको पनि भूमिका छ ०६२–६३ मा । तर, क्रान्तिको नेतृत्व गरेको कसले भन्दा नेपाली कांग्रेसले । क्रान्तिको नेतृत्व गर्न हुने । सरकारमा जाँदा प्रायः जसो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा त कति पटक सरकारमा गएको छ एमाले । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा गएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सरकारमा जान हुने । पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी, आन्दोलन गर्छ । होला कांग्रेस पनि जनताको पक्षमा जति काम गर्नु पर्ने हो त्यति काम गर्न सकेन होला । त्यो कमजोरी हुन सक्छ । कांग्रेसले सच्चाउनुपर्छ । त्यस कारणले पनि हारेको हो कांग्रेसले । जनताको सबै मन जितको थियो भने त कांग्रेसले जिति हाल्थ्यो त कांग्रेसले । त्यो सच्चिनु पर्ला कांग्रेसलाई । कांग्रेसलाई सबक पनि होला । त्यो सबै गर्न हुने कांग्रेसमा जान नहुने भन्ने भएन नि ? अनि कम्युनिस्ट चाहिँ कांग्रेसमा किन गएको भन्छन मान्छेले । बरु अरु पार्टीमा गएको भए हुन्थ्यो पनि भन्छन् ।
कांग्रेसमा मैले दुइटा कुरा खोजेको छु । धेरै कुरा खोजेको छैन । आत्म सम्मान, स्वाभिमान, माया ममता, प्रेम र हार्दिकता टिमभित्र बसेर एउटै एकल कांग्रेस त्यो गुटफुट कुनै पक्षमा भन्दा पनि संस्थागत रुपमा कांग्रेस जाने र यसमा एउटा कुनै ठाउँमा जिम्मेवारी मेरो योग्यता, क्षमता र चाहनाअनुसार जिम्मा दिएर सँगै एउटा टिमको सदस्य भएर जाने मेरो इच्छा छ । मैले पाउँछु भन्ने नै छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र ललितपुर कांग्रेसका सभापति मदनबहादुर अमात्यले कतै स्थान दिन्छौँ भन्नुभएको छ । उदय शम्शेर राणा, मीनकृष्ण महर्जन, मथुरा, रविन दाई सबैले तपाई हामी एउटै लेबलको मान्छे हो भन्नुभएको छ । हामीले बाँडेर गरौँ । यहाँ लुछाचुँडी गर्नुपर्ने केही छैन भन्नुभएको छ । कांग्रेसमा म कसैको बिकल्पमा आएको होइन । कसैलाई विस्थापित गरेर त्यो ठाउँ लिन आएको होइन । म कम्लिमेन्ट्री परिपुरक हुने हो । उहाँहरू हुँदाखेरी असी किलो हुनुहुन्थ्यो भने म आउँदा ८५ किलो बनाउने । नब्बे किलो बनाउने त्यो परिपुरक बनाउन म आएको हुँ । मलाई आत्म सम्मान, हार्दिकता र क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने छ ।
मैले त्यो कल्पनै गरेको छैन । मलाई केपी ओली मन्त्री बनाए भने (मन्त्री बनाउन संविधानले दिँदैन), राष्ट्रिय सभामा सांसद बनाउने, केन्द्रीय सदस्य दिने र अर्को एक करोड पैसा दिए पनि म अहिलेको नेकपा भन्ने पार्टी चाहिँदैन । म त्यता जाँदैन । कांग्रेसमा धेरैले पाएका छैनन् । कांग्रेसमा के पाउँछस् भन्ने पनि छन् । ०५२ वर्षको भएँ । मैले ०३७ वर्ष राजनीति गरेँ । अब म सक्रिय राजनीति गर्ने भनेको १५ वर्ष गरौँला । त्यति समय म कांग्रेसमा बसेर बिताउन नसक्ने मान्छे छैन । कांग्रेसले केही पनि दिएन । मलाई नदिँदा कांग्रेसलाई न्याय भयो । कांग्रेस बलियो । देशलाई राम्रो भयो भने र केही नपाए पनि म फर्केर नेकपा जान्न । बरु राजनीति छाड्छु । म फर्किएर कतै पनि जान्न । सामाजिक काम अहिले पनि गरेको छु ।